Ulawulo lwe-intanethi yesitolo i-Swiss-apteka.com liqinisekisa ubungqina obupheleleyo beenkcukacha ezifunyenwe kubasebenzisi ababhalisiweyo. Zonke izibonelelo zomgaqo-nkqubo wokukhusela kunye nokusebenzisana nabathengi zisekelwe kwimimiselo esemthethweni kunye nezenzo zeRussian Federation.
Yonke ingcaciso oyichazayo ekubhaliseni iya kugcinwa kwindawo egciniweyo. Isitoreji se-intanethi i-Swiss-apteka.com iqinisekisa ukugcinwa okuyimfihlo xa iqhuba umyalelo, kwaye kwakhona ukuba ulwazi malunga nomthengi luya kusetyenziswa kuphela ukuphunyezwa komyalelo ofunyenweyo.
Idatha yakho yokubhalisa iyadingeka kuphela ukuba abaphathi bethu bakwazi ukunxibelelana nawe ngefowuni, kwaye inkonzo yokuhanjiswa yakwazi ukuhambisa iimpahla eziyalelwe kwindawo efanelekileyo ngexesha.
Ukongeza, ngokubhalisa, unokufumana ulwazi malunga nazo zonke iindaba zeesitolo sethu: ukufumana iimveliso ezintsha, ukuthengisa, iinkqubo ezizodwa.
Ukuba unayo ingxaki okanye imibuzo malunga nokugunyazwa-ukubhaliswa kwisitolo - bhalela kuthi nge-imeyile info@swiss-apteka.com kwaye siya kuhlala sikunceda!
Abameli besitolo se-intanethi i-Swiss-apteka.com abayi kuze bakucele iinkcukacha zekhadi leplastiki okanye ezinye iinkcukacha eziyimfihlo.
1. Ezinye izinto ezibekwa kwisayithi ziyimpahla yengqondo yesitolo se-Swiss-apteka.com. Ukusetyenziswa kwezinto ezinjalo ngaphandle kwemvume yabanini-site abanqatshelwe.
2. Iwebsite yesitolo se-intanethi i-Swiss-apteka.com inezixhumanisi ezivumela ukuba uye kwenye indawo. Asinabo uxanduva lenkcazelo eshicilelwe kulezi ziza, kwaye sibabonelela ngeenjongo kuphela ukwenzela ukubonelela ngokufanelekileyo kwiindwendwe kwiwebhusayithi yakho.
Ulwazi lomntu kunye nokhuseleko:
1. Isitoreji se-intanethi i-Swiss-apteka.com isiqinisekisa ukuba akukho nkcazelo oyifumayo kuwe iya kunikwa nawuphi na umntu wesithathu, ngaphandle kweemeko ezichazwe ngumthetho okhoyo weRussia Federation.
2. Kweemeko ezithile, i-intanethi yesitolo i-Swiss-apteka.com inokucela ukuba ubhalise kwaye unikele ngolwazi lomntu. Ulwazi olubonelelwe lusetyenziswa kuphela xa kulungiswa umyalelo kwisitoreli se-intanethi okanye ukubonelela isivakalisi ngolwazi olukhethekileyo.
3. Ulwazi lomntu siqu lungatshintshwa, luhlaziywe okanye lususwe naliphi na ixesha kwicandelo "leKhabinethi yangasese".
4. Ukuze kukunike ulwazi ngolunye uhlobo, isitolo se-intanethi iSwitzerland-apteka.com, kunye nemvume yakho ecacileyo, ingathumela imilayezo yolwazi kwidilesi ye-imeyile ecacisiweyo kubhaliso. Ngaliphi na ixesha ungazibhalisa kwi-mailing list.
5. Ingcaciso kule website iyimvelo yolwazi, kwaye nayiphi na inguqu ingenziwa ngaphandle kokukwaziswa kwangaphambili.
Kuzo zonke iimfuno ezihambelana nokuthotyelwa komgangatho wokhuseleko, iikopi kunye nezinye iimeko - nceda uqhagamshelane nolawulo lwewebsite kwi-info@swiss-apteka.com
Nantsi ikhathalogu yaseburhulumenteni yaseSwitzerland
Ukuhanjiswa kweemveliso kwiRashiya kuphela ukusetyenziswa komntu kunye nesixa esingadluli i-euro ye-1000.
Uthenga kuphela kwiivenkile ezisemthethweni eSwitzerland.
Iikhathalogu zemveliso yezempilo yaseSwitzerland ngokunikezelwa kuwo onke amazwe ehlabathi.
Ukuthenga iimpahla ezivela kwihlabathi lonke ngeGenva
© 2011-2019. Ukuhanjiswa kweempahla ngeposi ukusuka kwikhemisi eSwitzerland eSwitzerland-Apteka.Com